Ciyaaryahanka cusub ee Arsenal Perez “waa laacib xirfadyahan u ah Gunners”
HomeWararka MaantaCiyaaryahanka cusub ee Arsenal Perez “waa laacib xirfadyahan u ah Gunners”
Weeraryahanka cusub ee kooxda Arsenal ay la soo wareegtay ee Lucas Perez ayaa diyaar u ah inuu “cidhiidhi geliyo” difaacyahanada horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan. Sidaasi waxaa sheegay saaxiibkiisa cusub ee Shkodran Mustafi.
Labada laacib waxay Arsenal soo gaadheen maalintii ugu dambeysay ee uu xidhmayay suuqa kala iibsiga ciyaaryahanadu. Waxaa laga kala keenay Deportivo iyo Valencia.
“Kuma raaxeysto in laga hor yimaado,” ayuu yidhi Mustafi oo kasoo jeeda Jarmalka. Wuxuu intaa ku daray, “Waa weeraryahan wanaagsan, waxa uu haystaa wax kasta oo weeraryahan uu u baahan yahay. Waa qof aad si wanaagsan ula ciyaari karto”.
“Waxa uu xilliga saxda ah joogaa meesha ugu wanaagsan, sida uu muujiyay xilli ciyaareedkii hore ee La Liga. Halkaasi waxaan ka ciyaarayay laba sano waanan ogahay inay adag tahay in goolal badan laga dhaliyo La Liga, sababtoo ah halkaasi waxaa jooga difaacayaal wanaagsan”, ayuu tilmaamay ciyaaryahan Mustafi.